Iindaba-Indlela yokuFakelwa kombhobho we-PE
Umsebenzi wokufakwa kombhobho we-PE kubaluleke kakhulu kwiprojekthi, ke kufuneka siqhelane namanyathelo aneenkcukacha. Apha ngezantsi siza kukwazisa ngendlela yoqhagamshelo lombhobho we-PE, ukubekwa kombhobho, uqhagamshelo lombhobho kunye neminye imiba.
Iindlela 1.Pipe uqhagamshelo: Kukho ikakhulu iintlobo ezintathu uqhagamshelo umbhobho: lempundu-fusion iwelding, electro-fusion iwelding kunye socket welding.
Ukubekwa kwemibhobho: Isiseko sokuhambisa amanzi kunye nokuhanjiswa kwemibhobho kufanele ukuba ibe ngumaleko wokuqala womhlaba ngaphandle kwelitye eliqinileyo kunye netyuwa. Xa umhlaba wokuqala unelitye eliqinileyo elibukhali kunye netyuwa, kufuneka kubekwe isanti entle okanye umhlaba ococekileyo. Kwamacandelo anokubangela ukuhlala okungalinganiyo kombhobho, isiseko kufuneka siphathwe okanye kuthathwe amanye amanyathelo okulwa ulungiso.
Uqhagamshelo lombhobho: Uqhagamshelo lombhobho luya kwamkela uqhagamshelo lombane-fusion (uqhagamshelo lwesokhethi yombane, uqhagamshelo lwesihlalo sombane) okanye uqhagamshelo olushushu lwefusion (uqhagamshelo olushushu lwe-fusion socket, uqhagamshelo olushushu lwe-fusion butt, uqhagamshelo olushushu lwesali). ayisayi kusetyenziswa. Xa uqhagamshela imibhobho ye-PE ngemibhobho yesinyithi, uqhagamshelo lwentsimbi-yeplastiki yotshintsho kufuneka yamkelwe. Emva kokuba ukufakelwa kwenkqubo yokubhobhoza kugqityiwe, emva kokuba ukuhlolwa kokubonakalayo kufanelekile, yonke inkqubo kufuneka icocwe ngokwamacandelo. Indawo yokucoca kunye novavanyo kufuneka icinezelwe umoya, kwaye iqondo lobushushu alifanelanga ukuba ngaphezulu kwe-40 ° C.
Uvavanyo lokuqina komoya: Sebenzisa isepha okanye isepha yolwelo ukujonga ukuba amalungu ayavuza na. Emva kokuba uhlolo lugqityiwe, hlamba into yokuhlamba okanye isepha yexesha.
Injongo kaChUANGRONG kukubonelela abathengi abahlukeneyo ngesisombululo esifanelekileyo sokumisa inkqubo yombhobho weplastiki. Inokubonelela ngenkonzo eyilwe ngokufanelekileyo, eyenzelwe iprojekthi yakho.